Nandresy ny TCC Africa & AfricaArXiv tamin'ny ASAPbio sprint - AfricaArXiv
navoakan'ny TCC Africa & AfricaArXiv on 4 ny Desambra 2020 4 ny Desambra 2020
Eo ambanin'ny lohateny Fampaherezana ny fanasitranana ny fanaovana pirinty sy ny famerenana, ASAPbio dia nanao haingam-pandeha haingam-pandeha hanatsarana ny fampahafantarana ireo hevitra vaovao sy efa misy amin'ny famporisihana ny famerenana sy ny famerenana mialoha. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Wellcome, ny Initiative Chan Zuckerberg, Howard Hughes Medical Institute, Dora, EMBO Press, PLOS, ary eLife.
TCC Africa niara-niasa tamin'ny AfricaArXiv dia nanolotra tolo-kevitra iraisana tamin'ny Fahaiza-manorina amin'ny famerenanana mialoha sy fanabeazana ny namana any Afrika. Faly izahay mizara fa nandresy sokajy roa izahay tamin'ny hazakazaka ASAPbio hazakazaka tamin'ity herinandro ity:
Mitombo ny fisolo tena
Miarahaba antsika rehetra nahazo loka tamin'ny #PreprintSprint!
Seho tsara indrindra: Manova ny famerenana ny mpiara-mianatra amin'ny alàlan'ny Mentorship sy ny Community Engagement, @PREreview_
Fampitomboana ny solontena: ny fahaiza-manao fanamafisana ny famerenan'ny mpiara-miasa sy ny fitsaboana azy any Afrika @tccafrica & @AfricArxiv
- ASAPbio (@ASAPbio_) Desambra 3, 2020
Ny fifaninanana sy ny tambajotram-pifandraisana ao amin'ny ASAPbio #PreprintSprint dia nanome antsika fotoana hizarana amin'ny Global North izay ezaka ezahina atao amin'ny fanohanana ireo mpikaroka afrikanina amin'ny fizotry ny famoahana akademika, ka izany dia manamboatra làlana ho an'ny fiaraha-miasa stratejika amin'ny famerenana sy ny fizotran'ny praiminisitra.
Joy Owango, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny TCC Africa sy ny mpikambana ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina an'ny AfricaArXiv
Misaotra an'i ASAPbio izahay, mpiara-miasa amin'izy ireo, ary ny mpitsara miaraka amin'ireo mpandray anjara amin'ity loka ity sy ny fankatoavana. Ho an'ireo rehetra nifidy sy nanohana anay, misaotra!
Ary farany ho an'ireo rehetra nahazo loka sy mpanolotra hafa - arahabaina! Manantena ny fiaraha-miasa amin'ireo tetik'asa naroso izahay.
Fampisehoana natao tao amin'ny sprint ASAPbio tamin'ny 3 Des 2020
Fahaiza-manorina amin'ny famerenanana mialoha sy fanabeazana ny namana any Afrika
Any Afrika, vitsy ny mpandray anjara no misy ary samy manana ny fahaiza-manao sy ny sehatra afrikanina-pan-Afrikanina hampianatra sy hanangana fahaiza-manao momba ny fotoana mety sy ny onjam-pamokarana fikarohana azo ampiharina isam-paritra izay misy ankehitriny. Matetika ireo mpikaroka afrikanina dia sahirana amin'ny karama ambany sy ny fangatahana fampianarana ambony, ka izany no mahatonga azy ireo ho sarotra ny manompo amin'ny famerenana ny asan'ny mpikaroka hafa. Noho izany dia mila mametraka kolontsaina sy mangarahara ary mora hanaraka ny dalam-pamokarana izay mahasoa isika roa, tsy ho an'ny mahazo ny famerenan'ny namana ihany, fa ho an'ny mpandinika ihany koa.
Momba ny ASAPbio
ASAPbio (mpiorina siansa sy famoahana boky momba ny biolojia) dia fikambanana tsy mitady vola izay entin'ny mpahay siansa hiatrika izany olana izany amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fanavaozana sy ny mangarahara amin'ny fifandraisana siansa fiainana.
Ny Ivotoeram-piofanana momba ny fifandraisana (TCC Africa), no ivontoerana fiofanana voalohany miorina amin'ny Afrika izay mampianatra fahaiza-manao mahomby amin'ny mpahay siansa. TCC Africa dia mari-pankasitrahana nahazo loka, natsangana ho orinasa tsy mitady tombom-barotra amin'ny 2006 ary voasoratra any Kenya.
Sokajy:	FampandrenesanaFomba fanorenanafiaraha-miasaPeer ReviewPrintera
Olabode E. Omotoso	· 4 Desambra 2020 amin'ny 5:09 hariva
Fiarahabana lehibe ho an'ny TCC Africa sy AfricaArXiv… Misaotra noho ny asa tsara ataonareo atsy Afrika
Mihobia amin'ny zava-bita lehibe kokoa!
Obanda	· 4 Desambra 2020 amin'ny 8:08 hariva
Miarahaba anao ary tsara tsara ho an'ny AfricaArXiv sy TCC Africa!
TCC Africa sy Eider Africa dia miara-miasa amin'ny mpikaroka mpikaroka momba ny asa voalohany avy any Sub Sahara Africa - AfricaArXiv	· 7 Mey 2021 amin'ny 5:12 hariva
[…] Fandresena ny TCC Africa & AfricaArXiv tao amin'ny sprint ASAPbio […]